Diyaarad ka baxday Somaliya oo shil ku gashay Garoonka Diyaaradaha Kenya – STAR FM SOMALIA
Diyaarad ka baxday Somaliya oo shil ku gashay Garoonka Diyaaradaha Kenya
Garoonka Diyaaradaha ee Joma Kenyatta ayaa si kumeel gaar ah loo joojiyay adeegyadii duulimaad ee uu sameynaayay,waxaana duullimaadyada loo wareejiyay Garoomada kale.
Sababta ka dambeysa in hakad la geliyay Shaqada Garoonka, ayaa lagu sheegay inay tahay Diyaarad ka baxday Somaliya oo u socotay dalka Kenya inay shil ku gashay Garoonka Diyaaradaha Joma Kenyatta
Hay’adda Duullimaadka Kenya ayaa shaacisay in JKIA Duullimaadyadiisa loo joojiyay si kumeel gaar ah.
Diyaaradan oo ay saarnaayeen 4 Qof ayaa ka baxday Somaliya, waxaan la sheegay in ay si lama filaan ah ugu dhacday Garoonka inkastoo aan khasaare la shaacin.
4 qof oo la socday Diyaaradda oo aan sidoo kale la sheegin waxa ay yihiin ayaa ka badbaaday shilkaas,waxaa sidoo kale Garoonka laga saaray Diyaaradaha yaallay.
Shilka qabsaday Diyaarada ayaa la sheegayaa inuu yahay inay ka baxday halka loo yaqaan Ran-weyga Diyaarada, taasina ay keentay dhismo Garoonka ku yaal inay bur bur u geysatay.
Hay’adda Duullimaadka Kenya ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in aysan jirin khasaare naf iyo maal ah oo ka dhashay shilkaas marka laga reebo in Diyaaradaha Garoonka yaallay laga saaray kuwii ku wajhnaana loo weeciyay Garoomada kale ee Kenya, gaar ahaan kuwa Mombasa.